Philippe Coutinho oo kala hadlay saaxiibadiis mustaqbalkiisa kooxda Barcelona – Gool FM
Philippe Coutinho oo kala hadlay saaxiibadiis mustaqbalkiisa kooxda Barcelona
Dajiye March 29, 2019
(Spain) 29 Maarso 2019. Philippe Coutinho ayay wararku sheegyaan inuu kala hadlay saaxiibada u dhow arimo quseeya mustaqbalkiisa kooxda Barcelona.
Wargeyska caanka ah “Sport” ee dalka Spain ayaa sheegay in Philippe Coutinho uu si cajiib ah kaga fekeray inuu ka tago Barcelona, isla markaana uu go’aan kama dambeys ah ku gaari doono mudo dhan hal bil gudaheed.
Sida laga soo xigtay isla wargeyskan, Philippe Coutinho ayaa u sheegay qaar ka mid ah saaxiibadiis xulka qaranka Brazil, arimo quseeya mustaqbalkiisa kooxda Barcelona.
“Waxaan ku fikirayaa inaan ka dhaqaaqo kooxda Barcelona, waan ogahay inuu yahay go’aan aad u adag, balse waxaa suuragal ah inay ahaato arin u wanaagsan nolosheyda iyo xirfadeyda kubadda cagta”.
Dhinaca kale wargeyska caanka ah ee “Sport” ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in ka tagista Coutinho ee kooxda Barcelona ayaa noqon doonta arin ka duwan waxa ay ku fikirayaan maamulka iyo saaxiibadiis kooxda.
Laga bilaabo xidigaha Messi iyo Suarez, shaqaalaha tababarka, maamulka ciyaaraha iyo guddiga, dhamaantood waxay ka war qabaan tayada iyo awooda ciyaareed ee xidiga reer Brazil, mana jecleysan doonaan inay lumiyaan adeegiisa.
Si kastaba Philippe Coutinho ayaa lala xiriirinayaa inuu dib ugu laaban doono horyaalka Premier League, gaar ahaan waxaa si toos ah lala xiiriirnayaa kooxda Manchester United, taasoo la micno ah in dharbaaxo xoogan ay ku noqon doonto arintan taageerayaashiisii hore ee Liverpool.
RASMI: Gonzalo Higuain oo ku dhawaaqay inuu isaga fariistay ciyaaraha heerka caalami
RASMI: Daniele Rugani oo heshiiska u kordhiyey kooxdiisa Juventus